Manambara ny fikatonany ny seha-baovao iray mahaleotena ao Hong Kong antsoina hoe Citizen News · Global Voices teny Malagasy
Tonga ny filazana andro vitsy nanafihan'ny polisy ny Stand News
Voadika ny 05 Janoary 2022 5:43 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, English
Ny ekipan'ny famoaham-baovao Citizen. Sary avy amin'ny media Hong Kong Citizen. Nahazoana alalana.
Ny tatitra manaraka etoana dia nivoaka tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 3 Janoary 2022. Navoaka eto amin'ny Global Voices indray izany noho ny fifanarahana fiaraha-miombon'antoka ara-botoaty.
Nanao fanambaràna ny seha-baovao mahaleotena Hong Kong Citizen News tamin'ny 2 Janoary, fa hitsaha-ketrika manomboka ny 4 janoary rehefa niasa nandritra ny dimy taona.
Notapahina izany hevitra izany rehefa nanafika ny sampam-baovao pro-demaokraty Stand News tamin'ny 29 desambra 2021 lasa teo ny polisin'ny filaminam-pirenena ao Hong Kong mihoatra ny 200, noho ny fiampangana ny seha-baovao no manao teti-dratsy mizara votoaty mampisara-kevitra. Rehefa nosamborin'ny polisy ny tale teo aloha sy ankehitriny sy mpiasa miisa enina, nogiazana ny vola miasa ao amin'ny orinasa, noraofina ny solosainany, dia nakaton'ny Stand News ny tranonkalany ary nambarany fa hitsahatra amin'ny asany izy.
Hitsahatra amin'ny fanavaozam-baovao ny tranonkalan'ny Citizen News ary hikatona “ao anatin'ny fotoana vitsivitsy,” hoy ny nambaran'ilay seha-baovao tsy mitady tombombarotra tao amin'ny fanambaràna.
Ao anatin'ny fo mavesatra no ilazanay fa hitsaha-ketrika manomboka amin'ny talata 4 janoary ny CitizenNews.
Ho an'ny mpamandrika sy ny mpamaky, tena mankasitraka anareo tamin'ny fanohananareo izahay. Hotahirizinay fatratra ity dia tsy mampino tao anatin'ny dimy taona ity.
Nosoritan'ny ekipan'ny Citizen News team fa notapahina tsy misy resaka ahiahy amin'ny fiarovana izao hevitra izao:
… [we have] never forgotten our initial intention, but regrettably, the drastic changes in society and the worsening of the media environment in the past two years has made it that we can no longer fulfil our ideals without any worry…in the eye of the wind, this small boat’s situation is severe under high winds and waves… In times of crisis, we must first ensure that everyone on the boat can be safe and secure.
… Tsy nohadinoinay velively ny fikasanay voalohany, saingy indrisy fa ny fiovana henjana dia henjana tao amin'ny fiarahamonina sy ny fiharatsian'ny tontolon'ny fampitam-baovao tao anatin'ny roa taona farany no mahatonga anahy tsy ho afa-manatontosa intsony ny idealinay tsy misy ahiahy… eo imason'ny rivotra, henjana dia henjana ny mahazo ity sambokely ity misedra rivotra sy ny onja avo dia avo… Ao anatin'ny fotoanan'ny krizy, tsy maintsy atao izay hiantohana fa tsy maninona tsy tra-doza izay rehetra ao anaty sambo.
Niandoha tamin'ny taona 2017 tamin'ny alalan'ny fanohanan'ny fanentanana fandraisana anjaran'ny daholobe ny Citizen News. Nitohy ketrika tamin'ny alalan'ny fanomezana sy ny famandrihan'ny mpamaky izy. Tamin'ny volana marsa farany teo, nanangana ny vaovao amin'ny teny shinoa izy taorian'ny fandosirana faobe avy tao amin'ny iCable News tamin'ny Desambra 2020. Mpanao gazety folo tao amin'ny iCable, tafiditra anatin'izany ny mpitarika ny ekipam-baovao fanadihadiana amin'ny teny shinoa efa nahazo loka tamin'izany, Szeto Yuen, no nanatevin-daharana ny seha-pampitam-baovao anjotra.
Tamin'ny volana Oktobra farany teo, nilaza ny Biraon'ny Filaminana fa “nandiso lalana ny mpamaky azy” ny seha-baovao tamin'ny filazana fa tsy nanaiky hiantoka ny falahalalaham-pitenenana ny lehiben'ny filaminana tamin'ny fanazavana ny lalànan'ny filaminana efa mitatao.
Natsangan'ny vondrona mpanao gazety menavazana ny Citizen News ary lasa seha-baovao nanana ny tara-kevitra nanintona ny olona rehefa nampihatra ny fahaiza-manao gazety nandritra ny dimy taona:
[We] still remember that on New Year’s Day in 2017, Citizen News was launched…During the press conference, many ‘veterans’ in media said that they were concerned about the situation with press freedom in Hong Kong, and hoped that Citizen News could continue the legacy of professional spirit of journalism, returning to the original intention of journalism, serving the public and for the public interest.
Mbola tsaroanay fa tamin'ny andron'ny taombaovao 2017 no namoahana voalohany ny Citizen News… Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, menavazana maro no niahiahy amin'ny toe-draharahan'ny fahalalahan'ny gazety tao Hong Kong, ary nanantena fa afa-mitondra ny fanahin'ny fahaiza-manao gazety ny Citizen News, miverina mankany amin'ny fikasana voalohany amin'ny fanaovan-gazety, manompo ny vahoaka sy ny tombontsoam-bahoaka.
Ny fikantonan'ny Citizen News sy ny Stand News no mametraka ny inmediahk.net ho seha-baovao ankihy mahaleotena zokiny indrindra mbola mihodina ao Hong Kong.
Nanatona ny Biraon'ny Filaminana ny HKFP hahazoana ny heviny.
Ho setrin'ny fanontanian'ny HKFP, milaza i Cédric Alviani, lehiben'ny birao Azia Atsinanana ao amin'ny Reporters Sans Frontières fa misedra afo mahamay ny fahalalahan'ny gazety:
After Apple Daily and Stand News, Citizen News is the third independent media outlet to fall victim to the intimidation and police harassment campaign led by Hong Kong Chief Executive Carrie Lam, whose goal seems to be a total suppression of press freedom on the territory.
Taorian'ny Apple Daily sy ny Stand News, ny Citizen News no media mahaleotena fahatelo lasibatry ny dona sy ny kendaroroky ny polisy tarihin'ny Lehiben'ny Mpanatanteraka ao Hong Kong Carrie Lam, izay hita fa manana ny tanjona hamafa tanteraka ny fahalalaham-pitenenana ao amin'ny zaratany.
Efa samy naneho ny ahiahiny amin'ny toetran'ny fahalalahan-gazety ao an-tanàna ny sendikàn'ny gazety sy ny klioban'ny gazety vahiny ao an-tanàna hatramin'ny nikatonan'ny Apple Daily. Ny fitsapan-kevitra natao teo anivon'ny mpitati-baovao tamin'ny volana lasa teo no nahitana fa efa ho ny atsasaky ny 100 namaly no mihevitra na mikasa ny handao ny tanàna noho ny fiharatsian'ny fepetran'ny asa. Tondroin'i Beijing ho “fitsabahana” ity fitsapan-kevitra ity.
Malezia 3 herinandro izay